Ego ole ka ị chọrọ iji meziwanye vidiyo gị?
Site na njirimara njikarịcha, usoro njikọ usoro jikọtara hyperlinks site na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ si n'aka gị site na njikọ dị iche iche njikọ njikọ dịka ntinye ederede, nzaghachi backlinks, mbipụta akụkọ na, wdg.Ihe omume ndị a niile na-enye gị ike ịtụkwasị obi gị ma bulie ngalaba aha gị n'ime ụlọ ọrụ gị. Ngwá ọrụ ọchụchọ na-ejikọta njikọ ndị na-ezo aka na saịtị gị dịka ọnụọgụ dijitalụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke votes ị nwere, nke dị elu na saịtị gị ga-adị na SERP.
Otú ọ dị, n'eziokwu, ọ bụghị nghoputa niile dị nhata. E nwere ọtụtụ usoro ntinye ego nke na-eme ka ịchọta engines ọchụchọ ma nweta ọkwa dị elu na ọdịnaya dị ala dị ala. Otú ọ dị, oge ndị ahụ, mgbe ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ njirimara na-adịghị mma na njirimara gị na mpaghara gị, agakwaghị. N'oge a, Google na ndị ọzọ nnukwu search engines na-alụ ọgụ mgbagwoju megide njikọ aghụghọ na-arụ ọrụ dị ka njikọ ọrụ ugbo, spun isiokwu na spammy blog kwuru. N'oge na-adịbeghị anya, Google guzobere ogo algorithm ọhụrụ dịka a ga-esi wepụ ihe nkwado ndabere dị ala niile. Ma ọ bụghị ya, Google nwere ike idozi ma ọ bụ deindexing, ma ọ bụ nweta iwu ndị na-eduga na ọkwa dobe. Ọ bụ ya mere, ugbu a, a na-enwe mmasị nke njikọ njikọta dị elu karịa ọtụtụ ha. Ọ pụtara na ọ dị gị mkpa ịlele ikike na mkpa nke isi iyi ahụ nke na-ejikọta gị.
Mgbe ọ na-abịakwute PageRank maka ebe nrụọrụ weebụ gị, a kwadoro nke a site na ogo nke njikọ na-abata na saịtị gị. Ọ pụtara na ọ bụrụ na ibe weebụ jikọtara gị na obere ala PR, gị onwe gị PageRank agaghị eto.
Ọ bụ ya mere otu azụmaahịa dị mma site na ebe nrụọrụ weebụ PR dị mkpa ga-efu karịa ọtụtụ puku ndị dị ala. Njikọ njikọ dị ala nke ndị ọrụ SEO na-abaghị uru, nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ njikọ ụgha na-ejikọta, na-emetụtaghị ebe nrụọrụ weebụ gị SEO na-ezighị ezi, kamakwa na-ebibi ihe oyiyi na ụlọ ọrụ gị.
Ndabere backlinks sitere na weebụsaịtị ndị nwere niche nwere nnukwu PageRank ga-eme ka azụmahịa gị bụrụ ihe bara ọgaranya ma nye aka search engines iji kọwaa ihe saịtị gị bụ banyere.
Ego ole ka ị chọrọ iji bulie elu na Google?
Enweghị isi iji bulie ajụjụ a dị ka azịza ya ga-adabere na ụlọ ọrụ gị na afọ nká. Otu ngalaba chọrọ naanị ọtụtụ backlinks dị elu iji bulie elu na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ, ebe ngalaba ndị ọzọ chọrọ ọtụtụ inbound njikọ iji bulie ikike ya ma melite aha ya. N'ezie, enwere otutu ọkwa ndị ọzọ na-enye aka na ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ na nsonaazụ ọchụchọ.
Gini bụ ihe nkwado kacha mma?
Ụdị ụdị backlinks kachasị mma bụ njikọ ndị ọzọ na-adịghị na ya. Ha na-abata na saịtị gị n'ejighi ịjụ ma nweta mgbe ị na-atụghị anya ya. Njikọ ndị a zụtara site na blọọgụ dị mkpa ma na-ewu ewu ma ọ bụ weebụsaịtị nke na-enyocha ọdịnaya gị ma kpebie ịkọrọ ya ndị na-agụ akwụkwọ ha. Dị ka a na-achị, a na-enwetara ụdị backlinks ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa ma na-eweta ọtụtụ okporo ụzọ na saịtị.
Otú ọ dị, ọ na-esiri ike ị nweta njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ a tụkwasịrị obi na niche ahịa gị. Isi iyi weebụ gị kwesịrị inweta ọtụtụ uru maka ndị ọrụ ma nwee aha ọma maka ịnweta ohere iji nweta njikọ sitere na ndị isi ụlọ ọrụ Source .